Akanjo ao an-trano
Ahoana no hanombohana fiaraha-miasa amin'ny orinasa
Inona no dikan'ny OEM / ODM amin'ny famokarana akanjo?
OEM sy ODM dia fomba roa amin'ny fanamboarana akanjo. Mety efa nahita azy ireo tamin'ny toerana maro ianao. Inona anefa no tena dikan'izy ireo? Andao hojerentsika. 1.OEM - Mpanamboatra Fitaovana Original Mpanamboatra fitaovana tany am-boalohany amin'ny akanjo dia fantatra amin'ny hoe mpamokatra akanjo marika fotsy na priv ...
Famokarana ririnina mafana amin'ny akanjo Lotte
Logo Customized Hoodies Hoodies fampiononana mahazatra miaraka amina paosety kangaroo style 2 * 2 rib elastane amin'ny cuffs sy andilany. Fitsaboana manohitra ny pilina 65% polyester / 35% landihazo borosy volom-borona 250g Mifanaraka amin'ny lokon'ny metaly vita amin'ny fehin-kibo mihintsy Custom logo vita pirinty vita pirinty ...
Fahafantarana karazam-bolo isan-karazany
Fototra volon'ondry Ka inona no atao hoe lamba volon'ondry? Ny volon'ondry volom-borona dia mifamatotra, ary avy eo farafahakeliny fako iray no kosehina hamaha ny fibre ary hamorona torimaso (tampoka ambony) ho an'ny fahatsapana malefaka sy malefaka. Ho an'ny pataloha volon'ondry sy akanjo lava, matetika ny atin'ny akanjo i ...
No. 6 faritra indostrialy Qianhu, tanànan'ny Luojia, distrikan'i Qingshanhu, tanàna Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina.